कसरी तपाइँको ग्राहक समर्थन रणनीति को लागी सर्वश्रेष्ठ च्यानलहरू छनौट गर्नुहोस् Martech Zone
तपाईंको ग्राहक समर्थन रणनीतिका लागि सर्वश्रेष्ठ च्यानलहरू कसरी छनौट गर्ने
बिहीबार, अगस्ट 29, 2019 शुक्रबार, अगस्त 30, 2019 अश्विनी डेव
व्यापार रेटिंग्स, अनलाइन समीक्षा, र सोशल मीडियाको आगमनको साथ, तपाईंको कम्पनीको ग्राहक समर्थन प्रयासहरू अब तपाईंको ब्रान्डको प्रतिष्ठा र तपाईंको ग्राहक अनुभव अनलाइनमा अभिन्न छन्। एकदम स्पष्टसँग, यसले तपाईंको मार्केटिंग प्रयासहरू कत्ति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरालाई फरक पार्दैन यदि तपाईंको समर्थन र अनुभवको कमी छ भने।
कम्पनीको लागि ब्रान्ड एक व्यक्तिको लागि प्रतिष्ठा जस्तो हो। तपाईं कठिन चीजहरू राम्रोसँग प्रयास गरेर प्रतिष्ठा कमाउँनुहुन्छ।
के तपाईका ग्राहकहरू र तपाइँको ब्रान्ड सबै समय एक अर्कासँग लगगरहेडमा छन्?
तपाईंको कम्पनीले ग्राहक सेवा विभागमा यसको दाँत डुब्दै आएको छ।
सन्तोषजनक र प्राय: तपाईंको ग्राहकको अपेक्षाहरू भन्दा बढि नै।
ती सबै नि: शुल्क (र अत्यन्त महँगो) giveaways र वफादारी कार्यक्रमहरूको बावजुद तपाईं अब र त्यसपछि सबै बाहिर शेल।
यदि यी सबैको जवाफ "हो" हो भने, तपाईले ड्राई board बोर्डमा फिर्ता जानुहुन्छ र फेरि जानुहुन्छ ग्राहक सेवा रणनीति। तपाईलाई मार्गनिर्देशन गर्नका लागि, "कसरी" भन्दा पहिले "किन" बुझ्दछौं र तपाइँका ग्राहकहरूलाई "अँध्यारो" छेउमा saunter को कारणले के भइरहेको छ हेरौं। यहाँ दुई प्रशंसनीय परिदृश्य छन्:
परिदृश्य १: तपाईं धेरै धेरै गर्दै हुनुहुन्छ
काउन्टर-सहज ज्ञानको रूपमा यो लाग्न सक्छ, त्यहाँ केहि छ जस्तै "धेरै" जब यो ग्राहक सेवाको कुरा आउँछ। जहिले पनि सबै चीजहरूको लागि 'व्यावहारिक', हामी बुझ्दछौं कि प्रत्येक च्यानलमा समर्थन प्रस्ताव गर्न वा हुन सक्दैन; सर्वव्यापी 'एक अर्थमा। मानव पूँजीको छोटो अभाव र अत्यधिक लागतहरू प्राय जसो यसको प्राथमिक कारणहरूको रूपमा उद्धृत गरिन्छ। त्यस अन्तमा, तर्कले आदेश दिन्छ कि यो राम्रो छ यदि तपाइँ सही ग्राहकहरू छनौट गर्नुहुन्छ जुन तपाइँको ग्राहकहरूको लागि अर्थ दिन्छ।
त्यसो भए, यदि तपाईंलाई आवश्यक छ भने, च्यानलमा पछाडि रोल गर्नुहोस् जुन तपाईंको लागि काम गरिरहेको छैन। तर सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, यसलाई राम्रोसँग गर्नुहोस्। अपरेटिव शब्द मनमोहक हुँदैछ। यहाँ छ कि तपाईको ग्राहकहरु रिसाएको र असन्तुष्ट महसुस गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी कदम चाल्न को लागी एक सुलभ सूची छ (अचानक र अपरिहार्य परिवर्तन को लागी आउँछ कि उनीहरुको बाटो मा):
मा प्रवेश गर्नुहोस् ग्राहकको मानसिकता उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौती / निराशालाई हटाउन। अधिक समानुभूतिपूर्ण मार्गलाई अँगालेर तपाई तिनीहरूको कष्ट कम गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको चासोलाई प्रभावकारी रूपमा समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यान्वयन गर्नुहोस् चरणहरू मार्फत परिवर्तन गर्दछ एकै पटक सबै समर्थन उपकरण हटाउनुको सट्टा। त्यसो गर्ने एउटा तरिका वैकल्पिक समर्थन विकल्पहरू प्रदान गरेर र कुनै पनि प्रकारको ग्राहक समर्थन हटाउनु अघि यसलाई प्लेटफर्ममा हाइलाइट गर्नु हो।
अधिकको लागि अप्ट गर्नुहोस् रचनात्मक र निजीकृत ग्राहक समर्थन विकल्पहरू एक चोटि च्यानलहरू बन्द भए। शैक्षिक मार्गनिर्देशनहरू ग्राहकहरूलाई हात समाएर राम्रोसँग काम गर्दछन् र उनीहरूका लागि उपलब्ध सबै विकल्पहरू प्रस्तुत गर्दछन्।
अधिक अपनाउनुहोस् प्रत्यक्ष र ईमानदार संचारको शैली जब यो ग्राहकहरु लाई तिनीहरूको निपटान मा उपलब्ध समर्थन च्यानलहरु को बारे मा शिक्षित गर्न आउँछ। उदाहरण को लागी, Kinsta ब्राण्ड को लागी उनीहरु को ग्राहकहरु को लागी यहाँ छ:
समर्थन कार्य प्रायः सावधान, केन्द्रित सोच र अनुसन्धानको आवश्यक पर्दछ। केवल अनलाइन समर्थन पाउँदा हामीलाई द्रुत र बढी कुशल ढ in्गले तपाइँको वेबसाइटको समस्या निवारण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ, किनभने हाम्रो ईन्जिनियरहरूले सम्भव थोरै संख्यामा अवरोधहरू र अवरोधहरूको साथ तपाईंको समर्थन सरोकारहरू समाधान गर्न आफ्नो सबै ऊर्जा केन्द्रित गर्न सक्षम छन्। यसको फलस्वरूप, तपाईको समर्थन अनुरोधहरू अन्ततः द्रुत रूपमा छिटो समाधान हुन्छ भन्ने हो।
विचार एक यात्रा को रूप मा ग्राहक समर्थन र कुञ्जी टच पोइन्टहरू पहिचान गर्नुहोस् जसले ग्राहकहरूलाई समर्थन प्रणालीमा हुने परिवर्तनहरूको बारेमा सूचित गर्दछ। यसमा उदाहरणहरू समावेश छन् जस्तै पुरानो अवतरण पृष्ठहरू समुदाय फोरममा पुनःनिर्देशित गर्दा जहाँ ग्राहकहरूले ब्रान्डको चलिरहेको घटनाक्रममा नयाँ र प्रेरणादायक सामग्री फेला पार्न सक्दछन् - समर्थन सम्बन्धित वा अन्यथा।
कुञ्जी टेकवे: उक्ति, "अझ राम्रो छ" सधैं श्रेयस्कर हुँदैन जब यो एक तारकीय ग्राहक सेवा अनुभव को प्रस्ताव को लागी उपकरण को उपयोग गर्न को लागी आउँछ। कहिलेकाँही, कम र अधिक केन्द्रित विकल्पहरूले काम अझ राम्रो र छिटो गर्दछन्। साथै, यसले तपाईंको ग्राहकहरूलाई 'परिवर्तनहरू' भरि मार्गदर्शन गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ जुन स्पष्ट र प्रभावकारी संचारको माध्यमबाट र वैकल्पिक समर्थन विकल्पहरू प्रदान गर्दै आएको हो।
परिदृश्य २: तपाइँ "BAD" ग्राहक समर्थन अनुभवहरूमा "पर्याप्त" फोकस गरिरहनु भएको छैन।
ग्राहकहरू प्राय: कम्पनीलाई यसको अद्वितीय प्रस्ताव, प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, सुविधाको सहजता, र गुणस्तरका उत्पादनहरू, अन्य चीजहरूको बीचमा प्रेम गर्दछन्। एकदम दुर्लभ नै एक "राम्रो ग्राहक अनुभव" को कारणले गर्दा किन तिनीहरू ब्राण्ड ए ओभर ब्रान्ड बी लाई रुचाउँछन्।
तथापि, चाखलाग्दो कुरा, खराब ग्राहक सेवा ग्राहकहरू एक ब्रान्डको साथ संलग्न गर्न रोक्नुको प्रायम प्राथमिक कारणहरू मध्ये एक हो। केहि उदाहरणहरू जुन दिमागमा आउँछन्:
ग्राहक सेवा प्रदायकबाट फोनमा ती कहिल्यै अन्त नहुने लामो लामहरू छन्।
त्यो झोला तपाईले आफ्नो हनिमुनको बाटोमा हराउनु भयो।
त्यो गडबड होटेल कोठा जुन तपाईंको क्रेडिट कार्डमा बम लागतमा समाप्त भयो।
सूची चल्छ ... यो बिना नै यो जानिन्छ कि यी सबै उदाहरणहरू एक डरलाग्दो ग्राहक अनुभवको लागि बनाउँदछन् जुन तत्काल हस्तक्षेप आवश्यक पर्दछ।
वास्तवमा, ग्राहक सम्पर्क परिषदले गरेको एक अध्ययनले दुई पेचीला विवरणहरू भेट्टाए जुन प्रत्येक कम्पनीको ग्राहक रणनीतिको अंश बन्नुपर्दछ: यसले दावी गर्दछ कि:
खुशी ग्राहकहरु वफादारी निर्माण गर्दैन; उनीहरूको प्रयासलाई कम गर्ने - उनीहरूको समस्या समाधान गर्न तिनीहरूले गर्नु पर्ने काम।
ग्राहक सम्पर्क परिषद
यसको मतलब यो हो कि तपाइँको ब्रान्डको मान-वृद्धि कल्पित, अपेक्षाकृत कम उपयोगी सुविधाहरू प्रस्ताव गर्नुको सट्टा ग्राहकको चिन्ता सजिलो बनाउन चारैतिर घुमाउनुपर्दछ।
पहिलो खोजीमा थप्दै, यसले भन्छ:
यस अन्तर्दृष्टिमा जानाजानी कार्य गर्नाले ग्राहक सेवा सुधार गर्न, ग्राहक सेवा लागत घटाउन, र ग्राहक मन्त्र कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
कुञ्जी टेकवे: ग्राहकहरु राम्रो सेवा को लागी पुरस्कृत कम्पनीहरु भन्दा खराब सेवाहरु को खाता मा सही बदला लिन तयार छन्। यदि तपाइँको ब्रान्डले यसको खुट्टामा सोच्दैन र ती बढ्दो ग्राहक गुनासोहरूको फिर्ता लग कम गर्दछ भने, यो खरायोको प्वालमा खस्नेछ - कहिल्यै पुन: जीवन दिनको लागि।
मुख्य प्रश्नहरू विचार गर्नुहोस् जब एक "ग्राहक-पहिले" दृष्टिकोण अँगालेको छ
जब तपाइँको ग्राहकलाई सहयोगी हात र सहानुभूतिपूर्ण कान प्रदान गर्ने कुरा आउँदछ, त्यहाँ केहि महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू छन् जुन आन्तरिकरण र जाँचको आवश्यकता छ:
प्रश्नको एक अधिक सामान्यीकृत फारम:
तपाईका ग्राहकहरु को हुन्?
तपाईका आवाश्यकता / चाहना के हो?
के तपाईं विभिन्न डेमोग्राफिक्सको विविध प्राथमिकता सूचीकृत गर्न सक्नुहुन्छ?
प्रश्नको अधिक विशिष्ट फाराम:
ग्राहकको दृष्टिकोणबाट, कसरी "तत्काल" जरुरी छ जब यो जवाफहरू आउँछ? यो १० सेकेन्ड, minutes मिनेट, एक घण्टा, वा एक दिन हो?
कुन प्रकारको मध्यम तपाईंले प्रश्न / सरोकारको प्रकारको आधारमा प्रयोग गर्नुपर्दछ। मूल रूपमा, यसको लागि फोन समर्थन आवश्यक भएको मुद्दाहरू र अनलाइन व्यवहार गर्न सकिने मुद्दाहरूको बीचमा सीमांकन आवश्यक पर्दछ। सामान्यतया, वित्तीय मामिलाहरूलाई छिटो र प्रभावकारी रिजोलुसनको लागि फोन समर्थन आवश्यक पर्दछ।
एक उपयोगी टिप: जब तपाइँको ग्राहकलाई बुझ्ने कुरा आउँदछ, यसलाई एउटा थम्ब नियमको रूपमा लिनुहोस्:
तपाईका ग्राहकहरु के भनिरहेका छन् सुन्नुहोस् - तर अत्यन्त नजिकबाट।
भ्रमित? एक उदाहरण लिनुहोस् हाम्रो मतलब के हो भने ग्राहकहरूले फोन समर्थनका लागि सोधिरहेका हुन सक्दछन्, तिनीहरू वास्तवमै के चाहन्छन् छिटो प्रतिक्रिया। त्यसो गर्नका लागि यो सिफारिश गरिएको छ कि तपाईंको समर्थन टोलीले प्रशिक्षण लिईरहेको छ जसले उनीहरूलाई ग्राहकको प्रश्नहरूलाई तुरून्त र पूर्वनिर्धारित रूपमा सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ।
शीर्ष ग्राहक समर्थन उपकरणका पेशेवरहरू र विपक्षहरू: एक द्रुत गाईड
यसमा कुनै श doubt्का छैन कि जब यो ग्राहक सेवाहरूको कुरा आउँछ, विभिन्न कम्पनीहरूले विभिन्न रणनीतिहरूको छनोट गर्छन् - आधारमा उनीहरूको आवश्यकता, ग्राहकका अपेक्षाहरू, बजेट सरोकार, र यस्तै। प्लस, आज उपलब्ध विकल्पहरूको अधिकताका साथ, यो भ्रामक र अत्यधिक हो कम्तीमा भन्न सकिन्छ। तपाईंको लागि चीजहरू सजिलो बनाउनको लागि, हामीले कार्यका लागि चार प्रमुख ग्राहक समर्थन च्यानलहरूको लागि शीर्ष पेशेवर र विपक्ष सूचीबद्ध गरेका छौं, अर्थात्:
के यो एक उज्यालो ग्राहक अनुभव प्रस्ताव को लागी "सही कल" हो?
फोन समर्थन प्रयोग को पेशेवरहरु:
यो विश्वभरिका ब्रान्डहरूको बीचमा ग्राहक सेवा विकल्पहरूको सबैभन्दा प्रख्यात र मनपर्दो प्रकारमध्ये एक हो।
यो संचारको प्रत्यक्ष रूप हो जुन कुनै त्रुटि वा गलतफहमीको लागि कुनै ठाउँ छोड्दैन।
यो तुरुन्त र सही ग्राहकको चिन्ता र भावनाहरु लाई सम्बोधन गर्दछ।
यो जटिल र अधिक जरूरी समस्याहरूको ख्याल गर्न प्रभावी छ जुन ग्राहकहरूले सामना गर्न सक्दछन्।
फोन समर्थन प्रयोगको विपक्ष:
यो "पुरानो जमाना" देखा पर्न सक्छ वा पुरानो भएको देखिन्छ विशेष गरी युवा पुस्तालाई उनीहरूले कुराकानी गर्न टेक्स्ट मन पराउँछन्।
यसले ग्राहकहरूलाई लामो अवधिको लागि कुर्दै समाप्त गरेमा यसले चरम नराम्रोपन र निराशा निम्त्याउन सक्छ। यो सामान्यतया घटित हुन्छ यदि एजेन्टहरू व्यस्त छन् वा कम्पनी कम-कर्मचारी छन् भने।
टेक्निकल मुद्दाहरू जस्तै गरीब नेटवर्कले ग्राहकलाई सहयोगको लागि बोलाउनमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ।
के "चट्टि" भइनु भन्दा राम्रो भन्दा बढी क्षति गर्नु हो?
च्याट समर्थन को उपयोग को पेशेवरहरु:
यसले तत्काल र प्रभावकारी क्वेरी रिजोलुसन प्रस्ताव गर्दछ - कहिलेकाँही 92 २% जति माथि ग्राहकहरु बीच!
यो फोन समर्थन भन्दा सस्तो विकल्प हो र एक महान ज्ञान आधारको रूपमा कार्य गर्दछ।
यसले एजेन्टहरू / बट्सहरूलाई एकै समयमा धेरै व्यक्तिसँग कुराकानी गर्न सशक्त गर्दछ। वास्तवमा, CalCentreHelper द्वारा डाटा सुझाव दिन्छ कि वरिपरि “70०% एजेन्टहरू २- convers कुराकानी एकै साथ ह्याण्डल गर्न सक्दछ, जबकि २२% समर्थन एजेन्टहरूले एक पटकमा -2-। कुराकानीहरू ह्यान्डल गर्न सक्दछन्।
यसले कम्पनीहरूलाई सेवाहरू स्वचालित गर्न मद्दत गर्दछ र भविष्यका सुविधाहरू जस्तै क्रमश: च्याटबट र को-ब्राउजिंग एकीकृत गरेर थप गाईड अनुभव प्रदान गर्दछ।
यसले कुराकानीको ट्र्याक राख्न क्षमता प्रदान गर्दछ (प्राय: ड्यासबोर्ड मार्फत) जसले भविष्यका लागि उपभोक्ताका साथै ग्राहक प्रतिनिधिको लागि सजिलो सन्दर्भको रूपमा काम गर्दछ।
यसले ब्रान्डहरूलाई सशक्त बनाउँदछ किनकि उनीहरूले मूल्यवान अन्तर्दृष्टि (प्रत्यक्ष कुराकानी सत्रहरूबाट निकालेको) जस्तै प्रयोगकर्ता खरीद व्यवहार, विगतका गुनासोहरू, खरीददारको प्रेरणा र अपेक्षाहरू, इत्यादि लाभ लिन सक्दछन् र यसलाई राम्रो सेवाहरू / प्रस्तावहरू वितरण गर्न प्रयोग गर्दछन्।
च्याट समर्थन प्रयोगको ख्याल:
कायाकोका अनुसार लिपिबद्ध प्रतिक्रियाहरू तपाईंको ग्राहकहरूको लागि अपमानजनक हुन्छन्। २%% उपभोक्ताहरू भन्छन कि उनीहरूले लिपिबद्ध प्रतिक्रियाहरू सबैभन्दा निराशाजनक पाउँदछन्, र 29 38% व्यवसायहरू यसमा सहमत छन्।
यसले मुद्दाहरूको असन्तुष्ट समाधानलाई निम्त्याउँदछ यदि कुराकानीले ग्राहकको चिन्ता सम्बोधन गर्न असमर्थ छ र प्रयोगकर्तालाई एजेन्टमा पुनःनिर्देशित गर्नुपर्दछ। स्वाभाविक रूपमा, यसले अधिक समय लिने काम समाप्त गर्दछ र असन्तुष्ट ग्राहकतर्फ जान्छ।
यो चाँडो आमन्त्रित दुरुपयोग वा धेरै पटक प्रयोग गरीन्छ भने कष्टदायक हुन को लागी द्रुत रूपमा बढ्न सक्छ।
तपाईंलाई थाहा छ? मार्केटिंग डाइभ द्वारा डेटा दावी गर्दछ कि 55 XNUMX बर्ष भन्दा बढी व्यक्तिले टेलिफोनिक समर्थनलाई अन्य प्लेटफर्महरूमा रेफर गर्दछ।
मेल संचारको नयाँ माध्यम हो - वा यो हो?
ईमेल समर्थन प्रयोग को पेशेवरहरु:
यो संचार को एक सबै भन्दा धेरै प्रयोग गरीएको फार्म हो। वास्तवमा, डाटा सुझाव दिन्छ कि व्यक्ति पठाउँछन् 269 अर्ब प्रत्येक दिन ईमेल।
यसले ब्रान्डहरूलाई प्रश्नहरू पठाउन शक्ति दिन्छ - रात वा दिन, 365 दिन एक वर्ष।
भविष्यको सन्दर्भको लागि यसले स्वैच्छिक, लिखित प्रमाण (राम्रो अवधि को अभावको लागि) प्रदान गर्दछ ताकि सबैजना एकै पृष्ठमा रहनेछन्।
यो कुराकानी बोट सुविधाहरू प्रयोग गरेर यस्तै खोजीहरू स्वचालित गर्ने अवसरको रूपमा डबल हुन्छ।
यसले ब्रान्डलाई ग्राहकहरूसँग बढी अनुकूलित र अनौपचारिक तरीकाले संवाद गर्न मद्दत गर्दछ। तपाईं अधिक सजीलो पछिल्लो कुराकानीमा अनुगमन गर्न सक्नुहुनेछ।
ईमेल समर्थन प्रयोगको विपक्ष:
यसले नसक्ने त्रुटिहरू निम्त्याउन सक्छ। उदाहरण को लागी, यो अमेजन ईमेल एक व्यक्ति को लागी पठाइएको थियो जसले बच्चा आशा गरेनन् र केहि पनि उर्वरता समस्याहरु थिए! तपाई कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ, सार्वजनिक आक्रोश चरम सीमामा थियो। स्वचालित ईमेल सदस्यताहरूको जाँच प्रत्येक अब-र-त्यसपछि यी जस्तो दुर्घटनाबाट बच्न आवश्यक छ।
यो फोन समर्थनको विरोधको रूपमा अधिक समय-उपभोक्ता हो।
यसले तत्काल क्वेरी रिजोलुसन प्रस्ताव गर्दैन किनकि ईमेलहरूले जवाफ दिनको लागि लामो समय लिन्छ। यो ठूलो नकारात्मक हो किनकि फोरेस्टर रिसर्चले दावी गरेको छ कि "consumers१% उपभोक्ताहरूले छ घण्टा भित्र ईमेल प्रतिक्रियाको अपेक्षा गर्छन्।"
यसको लागि धेरै विशेष सीपहरू चाहिन्छ जस्तै प्रयोगकर्ताको दिमाग पढ्न र रेखाहरू बीचको पढ्ने क्षमता। संचार अधिक अप्रत्यक्ष छ र उल्टो हुन सक्छ। सबैमा, संचारको प्रस easily्ग सजिलैसँग बहु ईमेल एक्सचेन्जको बीचमा हराउन सक्छ।
सामाजिक मीडिया समर्थन:
के एक अनलाइन सामाजिक उपस्थिति एक वरदान वा बेन छ?
सामाजिक मिडिया समर्थन को उपयोग को लागी:
यसले विभिन्न तरिकाहरू प्रदान गर्दछ जसमा कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ता चिन्ताहरू पोष्ट गर्न सक्छन् जस्तै पोष्ट टिप्पणीहरू, निजी / प्रत्यक्ष कुराकानीहरू, र समूह सन्देशहरू। यसले बजार अनुसन्धान गर्न र तपाइँको प्रयोगकर्ताको अझ राम्रो बुझ्न मद्दत गर्दछ।
स्वभावैले सार्वजनिक हुँदै, यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई क्वेरीहरूको उत्तर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ जुन उनीहरूसँग हुन सक्छ कसैले यो पहिले नै पोष्ट गरेको हुन सक्छ। ब्रान्डहरूले एक समुदाय फोरम गठन गर्न सक्दछ जुन समान विचारधाराका मानिसहरूलाई एकसाथ बाँध्छ र उनीहरूको प्रश्न / सरोकार सम्बोधन गर्न मद्दत गर्दछ।
यो शाब्दिक रूपमा नि: शुल्क हो र उपभोक्ता फिडब्याक्सको लागि ठूलो अवसर प्रदान गर्दछ।
यो ब्राण्ड को लागी एक राम्रो अवसर को रूप मा कार्य गर्न सक्दछ सकारात्मक अनुभव पोष्टिंग उपभोक्ताहरु को माध्यम बाट प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्न। ब्रान्डले हास्य भावना पनि प्रयोग गर्न सक्छ र प्रयोगकर्ता सर्तहरू सम्बोधन गर्न बढि रचनात्मक हुन सक्छ! माथिको उदाहरणमा स्काईस्केनरले यसलाई शानदार प्रदर्शन गर्छ।
यसले कम्पनीको क्षमतालाई परिवर्तन गर्न र गतिशील समयलाई अनुकूलन गर्न प्रदर्शन गर्दछ किनकि सामाजिक मिडियामा सक्रिय हुनु आज आवश्यकता हो। मार्केटिंग डाइभ द्वारा अनुसन्धानको रूपमा एक ठूलो प्लस भविष्यवाणी गर्दछ कि "२-वर्ष उमेरका र मुख्य रूपमा सामाजिक सेवालाई ग्राहक सेवाको लागि उनीहरूको मनपर्दो साधनको रूपमा छनौट गर्‍यो। ”
यसले उत्कृष्ट ग्राहक सment्लग्नतालाई पनि सक्षम गर्दछ र ब्रान्डहरूलाई प्रयोगकर्ताहरूसँग सार्थक सम्बन्ध निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।
सामाजिक मिडिया समर्थन को उपयोग को उपयोग:
यसले ब्राण्डको छविलाई बिगार्न सक्छ यदि फेसबुक, ट्विटर, इत्यादि जस्तो सार्वजनिक डोमेनमा धेरै नकारात्मक पोस्टहरू देखिएमा इमान्दार र आगामी हुने सम्भाव्यतालाई अत्यधिक हदसम्म क्षति कम गर्न मद्दत गर्दछ।
यसले अनावश्यक व्यवहारको जोखिमलाई चलाउँछ (उदाहरणका लागि बदमाशी / अपमानजनक टिप्पणीहरू) र यसले सुरक्षा लीकमा पनि लिन सक्छ जानकारी लिक वा ह्याकि। जस्ता।
यसको लागि निरन्तर अनुगमन र द्रुत प्रतिक्रियाहरू आवश्यक हुन्छ ग्राहक फ्ल्याकबाट बच्न।
प्रतिनिधिहरूलाई ग्राहकका अपेक्षाहरू भन्दा बढि बताउनु भनेको भ्रम, समय र प्रयास, र महँगो सस्ताका लागि उत्पादन हुन्छ।
जब यो सहि ग्राहक संचार उपकरणहरू छनौट गर्न आउँदछ, त्यहाँ कुनै एक आकार-फिट-सबै दृष्टिकोण छैन जुन ब्रान्डले लिन सक्दछ। संगठनहरूले बहु कुञ्जी बिन्दुहरूमा कारक लिन आवश्यक छ जस्तै उपलब्ध स्रोतहरू, बजेट र समय अवरोधहरू, ग्राहकका मागहरू र प्रयोगकर्ता अपेक्षाहरू, आदि। ग्राहक समर्थन रणनीति आउन जुन सबै खातामा डेलिभर गर्दछ:
सिमलेस, परेशानी-रहित, व्यक्तिगत, र प्रयोगकर्ताको लागि सकारात्मक ग्राहक अनुभव प्रदान गरेर।
यो सुनिश्चित गरेर कि रणनीतिहरु कम्पनी लागत छैन - आर्थिक वा अन्यथा।
लगानीकर्ता र ग्राहकहरु देखि कम्पनीका कर्मचारीहरु र ठूलो मा ठूलो समुदाय मा - शामिल सबै सरोकारवालाहरु लाई सार्थक मूल्य को पेशकश गरेर।
यो सबै जानकारीको साथ सशस्त्र, यो कुराको हिड्न र एक मूर्ख प्रुफ ग्राहक अनुभव प्रदान गर्ने समय हो - जुन एकै समयमा ग्राहकहरूलाई मनोरन्जन र शिक्षित गर्दछ। तपाईं भित्र हुनुहुन्छ? हामीले सोचेका थियौं।
टैग: ब्रान्ड प्रतिष्ठाईमेल समर्थनसामाजिक मिडिया समर्थन
अश्विनी व्यापार, उद्यमशीलता, ई-वाणिज्य, र डिजिटल मार्केटिंगको बारेमा भावुक छन्। उनीसँग काम गर्दैछिन अधिग्रहण गर्नुहोस् एक डिजिटल मार्केटिंग विशेषज्ञ को रूपमा। उनी एक स्वतन्त्र आत्मा र साहसी विद्वान हुन् जसले आफूसँग उनको निःशुल्क समय बिताउँछिन्, एक पटक मनपराउँछिन्, स ,्गीत, साथै खेल र खेल खेल्दै। उनी समुद्री दुर्व्यसनी छिन् र सडकमा एक थ्रिल खोज्ने यात्री भएर नयाँ अनुभवहरू पाउनको लागि जब उनले जीवनलाई हाम्रो कलाको कामको रूपमा हेरिरहेकी छन्।
सदस्यता भिडियो सेवा सुरू गर्न अन्तिम मार्गनिर्देशन
आजको डिजिटल मार्केटिंग विभागमा के भूमिका आवश्यक छ?